Ogaden News Agency (ONA) – Dhalinyaro Gadoodsan oo Fashiliyay Shir Diri-Dhabo Lagu Qabtay.
Dhalinyaro Gadoodsan oo Fashiliyay Shir Diri-Dhabo Lagu Qabtay.
Shir ladoonayay in lagu qabto magaalada Diri dhabo ayaa fashilmay kadib markii ay wacdaro ka muujiyay dhalinta Diri-Dhabo. Shirkan oo uu soo qabanqaabiyay maamul kusheega dabadhilifka ah ee hoos jooga Gumaysiga Itoobiya kaasoo ay doonayeen in ay ku qabtaan magaalada diridhaba ayaa fashil kudhamaaday.
Shirkan oo wakhti dheer laga soo shaqaynayay ayaa la isugu yeedhay dad lasoo qasbay oo odayaal ubadan si loogu qulaamiyo go’aamo iyo sheekooyin khaldan oo ladoonayo in lagu Marin habaabiyo rabitaanka shacabka Soomaalida Ogadeenya.
Shirkan oo loogu talagalay in ay qabtaan Qolo uu hogaaminayo kuxigeenka horjoogaha Gumaysiga wakiilka uga ah ciida Soomaalida Ogadeniya kaasi oo lagu magacaabo Xamdi ayaa fashilmay kadib markii ay goobta soo galeen dhalinyaro aad udhiiran oo ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah maamulka maqaar saarka ah. Buuq iyo sawaxan badan oo kadhashay goobta ayaa keenay in lakala dareero iyadoo aan waxba laysu sheegin taas badalkeediina ay dheceen dagaal iyo waliba buuq aad u badan.
Dhalinyarada kasoo jeeda qaybo kamid ah Ogadeniya ayaa ku dhiiranaya in ay ku banaan baxaan Gumaysiga iyadoo aan ognahay meesha uu maanta marayo xaalka Gumaysiga Itoobiya oo ay kushidan yihiin dhimbilo dab ah oo kufiday guud ahaan dhulka ay Itoobiya gumaysato.